Mideynta Qoyska - UNHCR Su-aalaha badanaa la isweydiiyo
Waa maxay mideynta qoysaska qaxootiga ah?
Mideynta qoysku waxay kulmisaa xubnaha qoyska ee ku kala nool dalal kala duwan. Mideynta qoyska qaxootiga waa halka qoysku ku kala tagay ugu yaraan hal xubin oo qoyska ka mid ahna loo aqoonsaday inuu yahay qaxooti, ​​ama haystaha ilaalin dhameystiran, waddanka uu / ay ku nool yahay. Qaxootigani wuxuu markaa dalban karaa qoyskiisa / qoyskeeda inay ku biiraan wadankaas.
Ma dalban karaa mideynta qoyska?
Mar alla markii aad qaxooti ahaan ama aqoonsi dhammaystiran u hesho waddanka aad joogto, markaa waad dalban kartaa xubnaha qoyska ee xaqa u leh inay kugu soo biiraan. Kadib waxaad yeelan doontaa xaaladda “kafaala-qaade” ama “codsade” xubnaha qoyskaaga.
Xubnaha qoyska ee xaq u leh mideynta qoyska waxay kuxirantahay wadanka aad ku nooshahay. Inta badan sharciyada qaran waxay u oggol yihiin xaasaska, waalidiinta carruurta yaryar iyo carruurta kugu tiirsan inay kula midoobaan. Wadamada qaarkood xubnaha kale ee qoyska ku tiirsan ayaa sidoo kale dalban kara. Xubnaha qoyska ee u qalma waxaa badanaa loo yaqaan “codsadayaal”.
Markaad aqbasho oo aad bixiso fiisooyinka khuseeya, qoyskaaga ayaa u safri kara si ay kula midoobaan adiga. Markii ay yimaadaan waxaa la siin doonaa sharci degenaansho (nooca ogolaanshaha ayaa ku kala duwan wadamada).
Xusuusnow in waqtiyada iyo nidaamyada gaarka ahi ay khuseeyaan, iyadoo kuxiran dalka aad degan tahay.
Waa kuwee waddammada leh barnaamijyada mideynta qoysaska qaxootiga?
Nidaamyada mideynta qoysaska qaxootiga ah ee ka go’naanta leh ayaa ka jira waddamada badankood. Barnaamijyadani waxay kaga duwan yihiin waddooyinka loo maro kafaala qaadka qoysaska muhaajiriinta kale (kuwa aan qaxootiga ahayn) inta badanna waa ka roon yihiin.
Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mideynta qoyska iyo faahfaahinta sida loo dalbado?
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan shuruudaha u gaarka ah waddanka iyo sida loo codsado, fadlan u tag qaybaha Dib u Midaynta Qoyska ee bogga waddanka ku habboon.